Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် အသစ်ထွက်မြန်မာစာကီးဘုတ် "Frozen Keyboard v1.1.3" – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
ရန်ကုန်တွင်တက္ကစီများကို On Call စနစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်မည် Toy Story Smash It! v1.1.0 Apk Game (37.8 Mb) Olive PDF Tools-V.1.00- Apk-(3Mb) Fokker (Wanted) Go Locker Theme Edjing PRO DJ Mixer Turntables V1.2.1 Apk-(19Mb) Home
Published On: Thu, Jan 12th, 2012 Android OS application များ / Android ဇော်ဂျီ ကီးဘုတ် | By သက်နိုင်စိုး Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် အသစ်ထွက်မြန်မာစာကီးဘုတ် "Frozen Keyboard v1.1.3"
Tags ShareFrozen Keyboard Developer Name-သီဟအေးကျော်
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် အသစ်ထွက်မြန်မာကီးဘုတ် “Frozen Keyboard v1.1.3″ ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာရဲ့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်းတူအောင်လုပ်ထားတဲ့ ကီးဘုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သုံးလို့ကောင်းတဲ့မြန်မာကီးဘုတ်လေးတစ်ခုပါ။
Frozen Keyboard v1.1.3 အားရယူရန်
အောက်က Link တွေမှာလည်းရယူနိုင်ပါတယ်။
Frozen Keyboard v1.1.3 အားရယူရန်(MediaFire Link)
Frozen Keyboard v1.1.3 အားရယူရန်(iFile Link)
Frozen Keyboard v1.1.3 အားရယူရန်(Ziddu Link)
Frozen Keyboard v1.1.3 အားရယူရန်(ZShare Link)
QR code scanner ဖြင့်ဖုန်းကိုအသုံးပြု၍ Direct ရယူရန်-
WhatsApp Messenger v2.10.90 for android(latest version)
34 comments on “Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် အသစ်ထွက်မြန်မာစာကီးဘုတ် "Frozen Keyboard v1.1.3"”	zinminhtet on November 14, 2012 at 5:03 pm said:
အကိုရေ ကျွန်တော် မိုဘိုင်းအတွက် application တွေဒေါင်းတိုင်း
ပုံမှန် ဖိုင်အဖြူရောင်နဲ့မပွင့်ပဲတခြားဟာတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်
Reply ↓	umyat san on November 21, 2012 at 11:13 pm said:
Reply ↓	peter on November 23, 2012 at 10:46 am said:
i like frozen keyboard
Reply ↓	salpalar on November 24, 2012 at 11:52 am said:
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ဖုန်းက i-mobile i styl Q3 ပါ မြန်မာစာရေးလို့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူများမြန်မာစာပိုလာရင်မမြင်ရဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါအုံး၊၊
Reply ↓	sai aung myint on November 27, 2012 at 12:25 am said:
အကိုရေ kindle fire myanmar စာသွင်းနည်းလေးပြောပြပါ၊
Reply ↓	Han Lay on November 27, 2012 at 3:28 am said:
အရင်ဆုံး Root လုပ်ပါ။ ပြီးရင် MMAS Font Changer နဲ့ မြန်မာစာထည့်ပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။
Reply ↓	aung aung on December 10, 2012 at 12:54 pm said:
Reply ↓	kyawsoeoo on January 8, 2013 at 12:16 pm said:
အကိုေ၇ ကျနော် Galaxy Tap7မှာ gmail မှာ မြန်မာစာရိုက်လို့၇တယ်။ ဖတ်လို့၇တယ်။ ဒါပေမဲ့ website မှာ ဖတ်လို့မ၇ဘူး ။ အဆင်ပြေ၇င် ပြန်လည် ဖြေပေးပါနော် ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Reply ↓	thiha aey kyaw on March 14, 2013 at 10:59 am said:
Reply ↓	Your Name... on January 12, 2013 at 10:30 am said:
အစ်ကိုကျွန်တော့်ဖုန်း galaxy S3 က မက်ဆေ့ပို့တာ ? တွေပဲပြနေတယ် ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲအစ်ကို
Reply ↓	ZawGyii on March 11, 2013 at 1:49 pm said:
အစ်ကိုရေ Message ထဲဝင်ပီး Setting ကနေ input mode မှာ Automatic ကိုဖြစ်ဖြစ် unicode ဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာ
Reply ↓	အောင်အောင်(စက်ာပူ) on January 23, 2013 at 1:33 pm said:
Reply ↓	Khon sat wa town on January 31, 2013 at 5:43 am said:
လိုချင်လို့ပါ ပြီးတော့ဖုန်းထဲကိုသွင်းနည်းလေးပါသိချင်ပါတယ် ကူညီပေးပါနော်အကို
Reply ↓	hein htet aung on February 24, 2013 at 3:05 pm said:
Reply ↓	star on February 24, 2013 at 3:52 pm said:
Reply ↓	Ma Sanda on February 25, 2013 at 8:49 am said:
May I know how to install myanmar font for Samsung Galaxy Note2Lte?
Reply ↓	Win Htike on February 25, 2013 at 7:10 pm said:
ကိုသီဟအေးကျော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော့်ဖုန်းမှာ အခု Frozen Keyboard ver 1.1.3 သုံးနေပါတယ်။ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသတ်ရယ် ရေးချရယ် နေရာလွဲလွဲသွားလို့ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ဥပမာ “ခိုင်ထူး” လို့ ရိုက်လိုက်ရင် “ခိုငထ်ူး” လို့ ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တာမျိုး။ ကျနော့်ဖုန်းက HTC One V ကို CyanogenMod 10 (Android version 4.1.2) တင်ထားတာပါ။ ဘာကြောင့် ဒါမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
Reply ↓	အာ ကာ ကျော် on March 24, 2013 at 7:01 am said:
ဟုတ်ပါတယ်.. ကျနော် လဲ အဲ့ ပြသနာ ပါပါ .. 4.1.2 မှာ ဖြစ်နေတာပါ.. အရင် gingerbread မှာ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်.
Reply ↓	JB 4.1.1. on March 28, 2013 at 5:16 pm said:
ကျနော်လဲ အဲဒီပြသနာပဲ တွေ့နေတာဗျ ဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားကြလဲ
Reply ↓	aungkyawmoe on February 26, 2013 at 11:34 pm said:
Reply ↓	Hnin on February 27, 2013 at 12:21 am said:
Galaxy note2hmer use loe ma ya bu phit nay tal…how can i do?
Reply ↓	kaung lay on February 27, 2013 at 2:59 am said:
May i know how to install myanmar font
for i-mobile i-style Q 6?
I use this app.but unuse.
Reply ↓	aungpanchitthu on February 27, 2013 at 9:28 am said:
Reply ↓	zawyee on February 28, 2013 at 1:11 pm said:
ဇော်ဂျီkeyboard က ICS 4.0.1 အတွက်သုံးလို့ရတာလေးပြောပြပေးပါ
Reply ↓	za on March 10, 2013 at 7:03 am said:
Frozen keyboard is possible for andriod version 4.1.1???
Reply ↓	aung thu on March 19, 2013 at 7:08 am said:
Reply ↓	jjlay on March 21, 2013 at 9:11 am said:
I want Myanmar keyboard.
Reply ↓	အာ ကာ ကျော် on March 24, 2013 at 6:58 am said:
jeally bean 4.1.2 မှာ စာသား တချို့ ကမောက် က မ ဖြစ်နေပါတယ်.. ဘယ်လို လုပ်ရပါမလဲ??
Reply ↓	Win Min on March 24, 2013 at 5:06 pm said:
ကျေးဇူး အရမ်းတင် ပါတယ်ဗျာ
Reply ↓	kyawsoeoo1975 on March 24, 2013 at 6:34 pm said:
my phone are zawgyifont rootfolder disable.helpme writefont.
Reply ↓	kyawsoeoo1975 on March 24, 2013 at 6:39 pm said:
Reply ↓	ramanr on April 14, 2013 at 4:49 pm said:
Reply ↓	ramanr on April 14, 2013 at 4:55 pm said:
ko ko on ImTOO iPhone Apps Transfer 1.3.1 For PcTheingi Aung on K-Pet Girl 2♥Pocket Girl EMILY (ready hack money)JingJing on V Root လို့ခေါ်တဲ့ Onclick Root Tool လေးပါခင်ဗျာYu Win on Galaxy S3 LTE( GT-I9305) jellybean 4.1.2 အား root ဖောက်ခြင်းကိုအောင် on Samsung Galaxy Official Firmwares Android Development